सुर्खेतका सडक कति व्यवस्थित र सुरक्षित, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि हटाइएनन् पोल र रुख « प्रशासन
सुर्खेतका सडक कति व्यवस्थित र सुरक्षित, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि हटाइएनन् पोल र रुख
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडकको बीचमा बत्तीका पोल र रुखहरू यथास्थानमै राखी सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यसरी सडकको बीच बीचमा रहेका बत्तीका पोल र रुखहरूले सडक कतिको सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्छ ?
वीरेन्द्रनगर-१० स्थित एयरपोर्ट चोकदेखि सानो सुर्खेत सम्म ६.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दा, रुख र बत्तीको पोल बीचमा छोडिएका छन् । त्यसमै सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यसमा कसको दोष भन्नुपर्ला ? निर्माणाधीन कालोपत्रे सडकको बिचमा १५ वटा बत्तीका पोल र रुख छन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित केही निर्माणाधीन सडकको बीचमा रहेका रुख र बत्तीको पोलमै कालोपत्रे गर्न थालिए पछि त्यहाँका स्थानीयले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि बत्तीका पोलहरू स्थानान्तरण नगरिएको डिभिजन सडक कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी नेत्र विलास पौड्याले बताए ।
विधुत प्राधिकरण सुर्खेतका प्रमुख टङ्क राज गिरीले सडक निर्माणका बारेमा समयमै जानकारी नगराउँदा पोल सार्नमा समस्या भएको बताएका छन् । गिरी भन्छन्,‘सडक निर्माण बारेमा समयमा जानकारी नगराउँदा बत्तीको पोल सार्नमा कार्यालयलाई समस्या भएको हो ।’
यसैगरी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सडकको बीचमा रहेका पोल र रुख समयमै नहटाए सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गरिने बताए । ‘बत्तीको पोल र रुख नहटाएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने ।
Tags : कर्णाली प्रदेश सडक सुर्खेत